Aragtida: Daaweynta, Wada shaqaynta iyo Shaqo-abuurka | Martech Zone
Dhawaan, waxaan helay emayl leh xiriiriye xagga sare ah oo sheegaya in dadku ay naqshadeynayaan emayl cusub oo aan doonayo jawaab celintayada. Waxaan ku dhajiyay xiriirka oo waxay ahayd nooc guud oo la heli karo oo ah naqshad cusub oo emayl shirkadeed ah. Markii aan baaray bogga, waxaa jiray goobo kulkulul (goobo wareegsan) oo la riixi karo isla markaana jawaab celin gaar ah ay bixiyeen dadka booqanaya bogga.
Waxaan dhagsiiyey hal meel oo aan moodayey inay waxoogaa horumar ahi ka jiri karaan, wadahadal ayaa ii furmay si aan u galo jawaab celinteyda ka dibna waxay codsatay magacayga iyo cinwaanka emaylka. Isku xirnaanta adeegsaduhu uma baahnin wax tilmaam ah - waan ogahay dareen ahaan waxa aan sameyn karo.
Madashu aad ayey u fiicneyd oo waxaan ku soo booqday bogga guriga, InVision. Waxaad isku dayi kartaa barxada 1 mashruuc bilaa lacag ka dibna mashaariicda xigta waxay u baahan yihiin lacag bille ah oo la awoodi karo Dhammaan qorshayaashooda waxaa ka mid ah inyar oo ka mid ah SSL-ka oo loo yaqaan '128 encryption' iyo kaydinta maalinlaha ah.
InVision waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay soo rogaan naqshadooda oo ay ku daraan meelaha kulkulul si ay ugu beddelaan shaashadaha ma guurtada ah mid la riixi karo, noocyo is-dhexgal ah oo dhammaystiran tilmaamno, kala-guur, iyo animations. Astaamaha waxaa ka mid ah xakamaynta nooca, maareynta mashruuca iyo qaabeynta labada websaydh, mobilada iyo kiniiniga, awoodda soo bandhigidda iyo wadaagista naqshadaha, iyo qalab guji iyo faallo si loo soo ururiyo jawaab celinta naqshadaha.
Tags: iskaashiiskaashiga qaabeyntasoo gelidapp invisionprototypingdesign webmaareynta mashruuca webkaaalada